Isitshixo sendlu esemaphandleni eLooberghe, eNorth - I-Airbnb
Isitshixo sendlu esemaphandleni eLooberghe, eNorth
Indlu yonke sinombuki zindwendwe onguFrançoise
Ininzi into enomtsalane kule ndawo incinci ekuthiwa yi-Maritime Flanders.
Indlu esemaphandleni ipholile, ineholo yokungena, ikhitshi, igumbi leshawa, igumbi lokulala eliyi-mezzanine, igumbi lokuhlala/igumbi lokuhlala elinesofa eyibhedi. Igadi ijonge kumzantsi. Kulala abantu abayi-4 (+ umntwana ukuya kutsho kwiminyaka eyi-2/3 ubudala kwizindlu ezisemaphandleni). Iinkwenkwezi eziyi-3 zokuqeshisa ngeholide, ileyibheli Accueil Paysan.
into eyongezelelekileyo EYENZA KUFUDUMALE ukususela ngo-Oktobha ukuya kuAprili.
Indawo yokuhlala idibanisa indlu yabanikazi, kungenwa kwindawo yokungena ezimeleyo.
Intshayelelo kwindlu esemaphandleni ngokweenkcukacha :
- Iholo yokungena evulekileyo nekhanyayo apho unokufumana isidlo sakusasa okanye isidlo sakusasa.
- Indlu yangasese -
Ikhitshi elinento yonke (isitovu, umatshini wokuhlamba izitya, ifriji, i-microwave, i-toaster, iketile ...)
- Igumbi lokuhlala elihle/igumbi lokuhlala (itafile yokutya, i-TV, i-Wi-Fi, ibhedi eyisofa yabantu abayi-240 x 190)
- Igumbi lokuhlambela (ishawa enendawo ethe tyaba eyi-140 x 90 sentimitha, isinki - umatshini wokuhlamba impahla, itafile yokutshintsha, ibhafu yosana, ibhodi yokuayinela)
- Igumbi lokulala kwi-mezzanine kunye nebhedi enkulu yabantu abayi-2 + ibhedi yomntwana engaphantsi kweminyaka eyi-2, ibhegi yeedrowa.
- Igaraji evaliweyo -
Igadi yeentyatyambo eneyadi (indawo eyi-200 m2) ejonge kumzantsi.
Ukufudumeza akuqukwanga kwixabiso kwaye kuza kufuneka kulungiswe kwisayithi ngexesha lokuhlala kwakho; kwezi nyanga zilandelayo ngoNovemba - ngoMatshi - ngoAprili : 3.5€ ngosuku nangoDisemba - ngoJanuwari - ngoFebruwari: € ngosuku.
Indlu yethu esemaphandleni ikwizinga leenkwenkwezi eziyi-3 kubantu abayi-4 (kunye nosana), kuluhlu lweendawo zokuhlala zabakhenkethi ezinefenitshala.
Indlu esemaphandleni ingaphandle kwedolophana esemaphandleni, ifumaneka lula kumgca weSt Omer - Dunkerque (malunga nemizuzu eyi-25 ukusuka elunxwemeni). Isuphamakethe malunga nemizuzu eyi-12 xa uqhuba. Iivenkile ezincinci (amaqebengwana, isilarha ...) embindini welali ekumgama weekhilomitha eziyi-5. Indawo ekuyo indlu esemaphandleni ikuvumela ukuba uhambe lula kwaye ubone ummandla : iDunkerque kunye nonxweme lwayo, iSaint Omer kunye nemigca yayo (ukukhwela isikhephe), izixeko ezihamba ngeendonga (iKassel, iGravelines, iBergues)...
Hlola ezinye iindawo onokukhetha kuzo e- Looberghe